ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings, Pulse Solenoid Valve, တရုတ်အတွက်စတား ​​discharge ထုတ်လုပ်သူ
ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings,သွေးခုန်နှုန်း Solenoid Valve,စတား discharge,လေတိုက်ပိတ်ဆို့ခြင်းခြိုငျ့,,
Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်: 11% - 20% Cert: FAMI-QS, GB, ISO9001, ISO9002 ဖေါ်ပြချက်: ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings,သွေးခုန်နှုန်း Solenoid Valve,စတား discharge,လေတိုက်ပိတ်ဆို့ခြင်းခြိုငျ့,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings
ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings, သွေးခုန်နှုန်း Solenoid Valve ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, စတား discharge R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
တရုတ်နိုင်ငံ ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings ပေးသွင်း
မြေမှုန့်စုဆောင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းအိတ်အိတ်, အရိုးစု (အိတ်လှောင်အိမ်), လျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်, သွေးခုန်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်တူရိယာ, ကြယ်ပွင့်အမျိုးအစားပြာကယ်ဆယ်ရေးအဆို့ရှင်နှင့်ထိုကဲ့သို့သော anode ပန်းကန်, AWN ဝါယာကြိုး, ယဉ်ယန်တိုင် vibrator, ကြွေထည်အဖြစ် electrostatic မိုးရွာသွန်းမှုအခြားအထူးဆက်စပ်ပစ္စည်းများပါဝင်ပါသည် ဒါကြောင့်အပေါ်ပုလင်း, ကြွေထည်ရှပ်နှင့်။ ထိုသို့သောအိတ် filter ကို, ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖုန်မှုန့်စုဆောင်း, စိုစွတ်သောမြေမှုန့်စုဆောင်း, ရေရုပ်ရှင်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း, electrostatic မိုးရွာသွန်းမှုနှင့်အခြားသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာတန်ဆာပလာအဖြစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက်သင့်လျော်သည်။
မြေမှုန့်စုဆောင်း inertia တိုက်မှုနှင့် electrostatic ထိစိမ့်ရဲ့ပေါင်းစပ်၏နိယာမ၏ဘက်ပေါင်းစုံယန္တရားကို အသုံးပြု. မြင့်စိုထိုင်းဆ, အနိမ့်ကျသောနှင်းရည်မှတ်နှင့်မြင့်မားသောဖုန်မှုန့်အာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသောဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးပစ္စည်းကိရိယာများ, တစျမြိုးပါပဲ။
ဖုန်မှုန့်ကို Catcher ဆက်စပ်ပစ္စည်းဖုန်မှုန့်အိတ်, အရိုးစု, လျှပ်စစ်သံလိုက်သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်, သွေးခုန်နှုန်း controller ကိုမြေမှုန့်ကို Catcher အခြားအထူးဆက်စပ်ပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ အဆိုပါ filtered flue ဓာတ်ငွေ့မြေမှုန့်စုဆောင်း၏ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်အညီအမျိုးသားရေးထုတ်လွှတ်စံတွေ့ဆုံရန်ရမည်, မြေမှုန့်စုဆောင်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခုခံယေဘုယျအား 150Pa အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောထား; အဆိုပါ filter ကိုပစ္စည်းများ၏အလုပ်လုပ်ဘဝထက်ပိုမို2နှစ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းနှင့်ဖုန်မှုန့်သန့်ရှင်းရေးစနစ်၏ solenoid သွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်များ၏အလုပ်လုပ်ဘဝကို5နှစ်နှင့် 100 အတထောင်ကြိမ်ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။
မြေမှုန့်စုဆောင်းသည့် inertial ခွဲခြာနှင့် filter ကိုမြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးပေါင်းစပ်ပြီး၏နိယာမချမှတ်။ ဒါဟာရောထွေးလေထုစီးဆင်းမှု၏မြင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပြီးထိရောက်စွာ 5um အောက်ကချောမှုန့်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစဉ်အလာဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်း separator များအတွက်စံပြအစားထိုးဖြစ်ပါတယ်။ မြေမှုန့်စုဆောင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုအပြည့်အဝအသုံးမပြုခင်မွမှေုနျ့ကိုစုဆောင်းရဲ့ features တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်သင့်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ဂရုတစိုက်ကုသခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အခုတော့။
1. စစ်ဆင်ရေးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တည်ငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဆူညံသံအနိမ့်သည်။ အဆိုပါပြတ်ရွေ့သေးငယ်သည်။ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုဘဝရှည်လျားသည်။ ဂီယာအစိတ်အပိုင်းများကျဇယားသံနှင့် bearing သံမဏိလုပ်နေကြသည်။
2. bearing ။ ဂီယာ box ကို။ သွားအဆို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်မှ။ မြင့်မားတဲ့အပူချိန်ဖုန်မှုန့်ရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှောင်ကြဉ်ပါ။ ရှေ့နှင့်နောက်အဖုံးများကောင်းစွာဖုန်မှုန့်ယိုစိမ့်တားဆီးနှင့်ရွေ့လျားအစိတ်အပိုင်းများ၏ဝန်ဆောင်မှုအသက်ကိုစောင့်ဖို့တံဆိပ်ခတ်နေကြသည်။
3. ကြောင့်ခိုင်မာတဲ့ Overload စွမ်းရည်နိမ့်သက်ရောက်မှု torque ရှိပြီးမကြာခဏစတင်များနှင့်ပြောင်းပြန်လည်ပတ်ဘို့သင့်လျော်သည်။
ဂြိုဟ်လည်ပတ်၏နိယာမချမှတ်ခြင်းဖြင့် 4, အ input ကိုနှင့် output ကိုအတူတူဝင်ရိုးအပေါ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထိုမော်တာတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှု၏ထူးခြားမှုရှိသည်, ဒါကြောင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖွဲ့စည်းပုံမှာအလေးချိန်အတွက်အသံအတိုးအကျယ်နှင့်အလငျး၌လှပတ္ထု, သေးငယ်သည်။
Related Products List: ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings , သွေးခုန်နှုန်း Solenoid Valve , စတား discharge , လေတိုက်ပိတ်ဆို့ခြင်းခြိုငျ့ , ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Bag